LANDA I-Boeing B-52 Stratofortress Alphasim FSX I-SP2 & P3D - Rikoooo
Play 25 506
Umbhali: Alphasim & Steve Hess
Ibuyekezwe ku-03 / 11 / 2012: Ukulungiswa kwensimbi yomlilo eyaboniswa ngokuqondile esikhundleni se-horizontally. Nayi i-Alphasim B-52 Bombardier modified for FSX I-SP2 /P3D kufaka phakathi amamodeli amabili i-B-52G ne-B-52H kanye nokwenziwa okuyisithupha, kufaka ne-superb 3D cockpit (VC) nemisindo yangokwezifiso ye-2D ye-B-52. Cindezela u-Ctrl + W ukuvula i-bomb bay ne-Shift + E ukuthola isigcino se-crew hatch (bona ibhukwana ngemininingwane eminingi). Kungumshini omkhulu kakhulu futhi udinga amafulethi wokuhamba, ikakhulukazi uma ukhokhiswa uphethiloli ngokugcwele. Kufaka phakathi izithombe ezisebenza njengopopayi we-coated driver, intuthu, amaphiko avumayo njll. Inendlela yemoto yendiza ephezulu inengqondo.
I-Boeing B-52 Stratofortress iyinhlangano ebombela ibanga elide, elisezingeni eliphansi, le-jet-powered strategic. I-B-52 yenzelwe futhi yakhiwa nguBoing, oye waqhubeka nokuhlinzeka ukwesekwa nokuthuthukiswa. Iqhutshwa yi-United States Air Force (USAF) kusukela ku-1950s. Ibhomu liphethe ama-70,000 amakhilogremu (32,000 kg) yezikhali.
Kusukela ngebhizinisi lezinkontileka eziphumelelayo ngoJuni 1946, ukuklama kwe-B-52 kwavela ezindiza eziqonde ngqo eziphethwe yizinjini eziyisithupha ze-turboprop kuya ku-YB-52 yombhalo wokugcina enezinjini eziyisishiyagalombili ze-turbojet namaphiko avuliwe. I-B-52 ithathe izindiza zayo ezincane ngo-Ephreli 1952. Eyakhelwe ukuphatha izikhali zenuzi ngenxa yezinkonzo zokuvimbela ama-Cold War-era, iB-52 Stratofortress yashintsha i-Convair B-36. Nanobe esengumdala wezimpi eziningana, i-Stratofortress ishiye imiphakathi ejwayelekile ekulweni. Igama lakhe iStatofortress livame ukusetshenziselwa ngaphandle kwezimo ezisemthethweni; kukhulunywe ngabasebenzi be-Air Force njengo BUFF (Big Ugly Fat / Flying Fucker / Fellow).
I-B-52 isekusebenzeni okusebenzayo ne-USAF kusukela ku-1955. Ama-bombers ahamba ngaphansi kwe-Strategic Air Command (SAC) waze wahlakazwa ku-1992 futhi indiza yayo yangena kwi-Air Combat Command (ACC); ku-2010 wonke ama-B-52 Stratesfortresses adluliselwe kusuka ku-ACC kuya ku-Air Force Global Strike Command (AFGSC) entsha. Ukusebenza okuphezulu ekuvinjeni okuphezulu kwe-subsonic kanye nezindleko zokusebenza eziphansi kakhulu kuye kwagcina i-B-52 enkonzweni naphezu kokufika kwezindiza zakamuva, kufaka phakathi i-Mach 3 North American XB-70 Valkyrie ekhanseliwe, i-geometry eguquguqukayo i-Rockwell B-1B Lancer, futhi i-Northrop Grumman B-2 Spirit eyamafutha. I-B-52 imakwe iminyaka engu-50th yonyaka wokusebenza okuqhubekayo no-opharetha wayo wokuqala ku-2005 futhi ngemuva kokuthuthukiswa phakathi kwe-2013 no-2015 kuyosebenza kuma-2040. (I-Wikipedia)